Nidaam Cusub oo Qaboojiyaha Penthouse-ka ah oo horay loo soo uruuriyay oo dhameystiran-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
Nidaam Qaboojiye Penthouse Cusub oo horay loo soo uruuriyay oo dhameystiran
Square Teknolojiyada ayaa sii deysay nidaamkeeda qaboojiyaha cusub bishii Juun 1,2020. Nidaamkan qaboojiyaha ee muuqaalka buuxa leh ayaa 100% lagu diyaariyey qaab si buuxda u lifaaqan kahor dhalmada. Waxay kudhowaad tirtirtay shaqadii isku xidhka dhuumaha berrinka, marka laga reebo isku xidhka nidaamka qaboojiyaha iyo isuumiyaha uumiga, ee lagu dhajin doono dusha sare ee jir. Xaaladdan farshaxanka ah waxay ka kooban tahay waxyaabaha soo socda:
Keydinta booska Naqshad isku dhafan, dhammaan qalabka iyo tuubooyinku waxay kuxiran yihiin shaashadda shaashadda iyadoo ay la socoto naqshad xeel dheer
Keydinta maalgashiga. Looma baahna qol qaboojiye oo dheeri ah in la dhiso. Kaydso kharashka dhismaha. Xayndaabku waa caddeynta cimilada. Looma baahna qaab dhismeed ama saqaf dheeraad ah.
Qiimaha rakibida goobta iyo waqtiga oo la keydiyay. Dhammaan qaybaha ayaa horay loo soo uruuriyey tuubooyinkuna horay ayey isugu xirnaayeen. Macaamilku wuxuu u baahan yahay oo keliya inuu isku xiro saddex tuubo oo u dhexeeya hawo-qabooraha iyo nidaamka qaboojiyaha berrinka.
Kaydinta tamarta. Ilaa 20% korontada waa la keydin karaa maadaama qalabka wax lagu beddelo loo isticmaalo si loo yareeyo awoodda mootada si xaddidan iyo waqtiga dhabta ah iyadoo laga jawaabayo culeyska qaboojiyaha dhabta ah.
Xakamaynta Cimilada. Taageerayaashu waxay ku rakiban yihiin inay bixiyaan hawo qasab ah oo ay ku hayaan heerkulka gudaha inta u dhexeysa hawlgalka. Nalalka waxaa lagu bixiyaa guriga gudihiisa.
Albaabo ayaa laga bixiyaa dhammaan dhinacyada xayndaabka si loogu oggolaado marin buuxa loogu helo adeegga nidaamka qaboojiyaha.
Loogu talagalay baahiyo kala duwan. Nidaamka waxaa loo qaabeyn karaa si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo compressor ah, culeys qaboojiye, qaboojiye, iwm
Copyright © Square Technology Group Co., Ltd. ICP ： 11073309 号 -1 Ogeysiisyada Sharciga P ICP 备 11073309 号 -1